VaChiweshe Vanoshora VaGuvamombe Mabatiro Avakaita VaKurotwi
VaChiweshe vataura izvi vachitura mutongo wavo pachikumbiro chakaitwa naVa Lovemore Kurotwi chokuti hurumende itevedzere mutongo wakange waturwa nedare iri neMugovera panyaya dzavari kupomerwa
VaChiweshe vati mapurisa aifanira kuendesa VaKurotwi kumatare edzimhosva musi weMugovera usati wadarika vachitevedzera mutongo wedare repamusoro izvo zvisina kuitwa nemapurisa.
VaChiweshe vati mutongi wedare ramejasitiriti VaGuvamombe vaisafanira kunzwa nyaya yehurumende sezvo paiva nemutongo wedare repamusoro waitaura zviri pachena kuti VaKurotwi vaifanira kunge vasisiri mumawoko emapurisa pakadarika nguva yakange yatarwa nedare repamusoro kuti vamiswe pamberi pedare ramejasitiriti.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi nematongerwe enyika dzinoti zvinoshamisa kuti sei hurumende yatora nguva yakareba isati yaunza vakuru veZMDC ava neve Canadile pamberi pematare nekuti kambani ye Canadile yava nenguva yakareba ichichera mangoda kwaMarange.
Vane ruzivo vanoti Va Mubaiwa nevamwe vavo vaitarisira kuwana mari nechimbi chimbi kwaMarange nekuti mangoda ainzi aiwanikwa nyore nyore.
Va Charles Mangongera inyanzvi mune zvematongerwe enyika. Va Mangongera vanoti izvi zvinoratidza kuti pane zvizhinji zvisina kunaka zviri kuitika kwaMarange zvinofanira kubuditswa pachena.